थुतुनो धेरै चलाउँदा फसिन् रामकुमारी झाँक्री, जेल हाल्ने ओलीको यस्तो तयारी (सहि वा गलत ?)
राष्ट्रपतिबारे दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल-नेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री विवादमा तानिएकी छन् । झाँक्रीले आक्रोशित हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध कडा शब्दमा प्रहार गरेपछि नेकपा केपी ओली समूहका
कार्यकर्ता प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । झाँक्रीले गोरखा पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिका कुरा त के गर्नु र? बडामहारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ । बडामहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन्छु । शीतल निवासको कारगेट छाडेर कोटेश्वर फर्किए हुन्छ । चाबहिल हो कि बानेश्वर कता घर छ रे! त्यता पनि नभए बालकोट नै
गए पनि हुन्छ । नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो लड्नु, तर बडामहारानीका लागि म पनि भारी हुन सकौँला । बडामहारानीविरुद्ध यहीँ कि रेखा लोप्चनलाई चुनाव लडाउँला । जनताको अधिकारमाथि गिद्धे दृष्टि लगाएर शीतल निवासमा
बडामहारानीको बास भएको छ । हामीले असंवैधानिक कदम किमार्थ स्वीकार नहोस भनेका थियौँ । नेकपा एमालेले २०५० सालमा गरेको निर्णय गम्भीर भूल थियो । मदन भण्डारीको हत्यापछि सेतो साडी लगाएर चुनावमा उठाउने नेकपा एमालेले
जुन संस्कृति सुरु गरेको थियो, जे गरेको थियो, त्यसको प्रतिउत्पादक हो विद्या भण्डारी । विचार सिद्धिएपछि कपाल, नाक, लुगा, देखाएर राजनीति गर्दा कुरो बिग्रिन्छ । विद्यालाई दोस्रो पटक राष्ट्रपति नबनाऊँ भनेर हामीले नेताहरुको दैलो
चाहर्यौँग तर हाम्रा कुरा कसैले पनि सुनेनन् । आजको दुर्भाग्य त्यहीकारण हामीले भोग्नु परेको छ ।
आफूमाथि हुने आक्रमण नसने ओली राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण त झन सहँदै सहँदैनन्। उनी उपयुक्त समयमा उपयुक्त बदला लिन्छन् । यस्तोमा राष्ट्रपतिमाथि जथाभावी ‘थुतुनो’ चलाएको भन्दै ओलीले झाँक्रीलाई नोटिसमा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसो त राष्ट्रपतिले पनि आफ्ना विरोधीलाई तह लगाएको इतिहास छ । प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्रीमा आफ्नी विरोधी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई तहलाई लगाएको नजिर ताजै छ । यस्तोमा सरकारले झाँक्रीमाथि उपयुक्त समयमा एक्सन लिनेगरी
नोटिस गरेको छ । अब झाँक्रीले कति दिन जेलको चिसो हावा खाने हो हेर्न बाँकी छ । त्यसो त झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि निरन्तर प्रहार गर्दै आएकी छन् । त्यसको पनि हिसाब किताब हुने नै होला ।
प्रकाशित मिति January 31, 2021